သက်ဝေ: သရဲ လက်လျှော့ နေလေတော့
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) March 4, 2011 at 11:44 PM
အမ ဌားထားတဲ့ သရဲက သူ့အေးဂျင့်ဌာနက
လစာ ကောင်းကောင်း မရဘူး ထင်တယ်၊
လစာ ကောင်းကောင်းပေးမှ သူလည်း
ကောင်းကောင်း ခြောက်ပေးမှာပေါ့ အမ ... :P
ကလူသစ် March 4, 2011 at 11:47 PM
သူရဲတော့ မသိဘူးဗျာ။ ဖတ်ရင်း မူးသွားလို့ အိပ်တော့မယ်။
rose March 4, 2011 at 11:47 PM
စာလေး လာဖတ် သွားတယ် အစ်မသက်ဝေ။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပျော်စရာလေး။ ရို့စ်ကိုလည်း လာခြောက်နော်။ ဒီ သရဲလေးကို အာဘွား ပေးလိုက်မယ် ခိခိး) http://redroseofburma.blogspot.com/
မေဓာဝီ March 4, 2011 at 11:56 PM
ဘလော့ဂါတွေကို ခြောက်ရင် သရဲ စိတ်ညစ်သွားမှာ အမှန်ပဲ အမသက်ဝေ။ ဘလော့ဂါတွေကိုယ်၌က သရဲတွေ ဖြစ်နေတာလေ .. ဟီးး ဘလော့သရဲ နက်သရဲ ချက်သရဲ ဖဘသရဲတွေ :D
သက်ဝေ March 5, 2011 at 12:00 AM
သူ့ကို လခ တိုးပေးဖို့ ပြောအုံးမှ...း))
ကလူသစ်က မဖတ်ခင်ထဲက မူးနေတာများ... သူများ သရဲကို လာပြီး အပြစ်ပုံနေတယ်...း))
ညီမ ရိုစ့်.. တကယ်လာခြောက်တော့မှ ကြောက်ပါပြီ ဆိုပြီး ထွက်မပြေးနဲ့နော်...
နာမည်နဲ့ဆို လာခြောက်မှာစိုးလို့ Anonymous နဲ့ လာပြုံးပြသွားတာ နေမယ်... ဟဲဟဲ
မေရေ... ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ... သရဲ စိတ်ညစ်တယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးပဲ ဖြစ်မယ်...း))
sonata-cantata March 5, 2011 at 12:11 AM
အားလုံးက သရဲနဲ့ ဘ၀တူတွေဆိုတာ
သရဲ မသိလေတာ ဒီဇတ်လမ်းရဲ့ မြှပ်ကွက်
ဇွန်မိုးစက် March 5, 2011 at 12:13 AM
အဟိ..ပင်နီဆူလာရောက်တုန်း ပဲပြုတ်ဝယ်တဲ့သူဆိုတာ ဇွန့်ကိုပြောတာလားမသိ :D
အို...သရဲလား...မကြောက်ရေးချ မကြောက် :P
ခင်မင်းဇော် March 5, 2011 at 12:17 AM
တမလွန်က သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းရေးရင် လက်နက်ကြီးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေမှတော့ ဒီသူရဲကို ကြောက်ဖို့မေ့နေပြီပေါ့ သက်ဝေရဲ့ :P
သက်ဝေ March 5, 2011 at 12:20 AM
သီတာလဲ တဖြည်းဖြည်း မိုက်လာဘီ... ခုထိတောင် မအိပ်သေးဘူး... သရဲနဲ့တော့ နီးနေပြီနော်... ဟင်း.. ဟင်း... ဟင်း...
ဇွန်... မကြောက် ကြောက်အောင်ကို ခြောက်အုံးမှာ... စကားမစပ် ပဲပြုတ် ကျန်သေးလား.. မနက်ကျ ထမင်းကြော်ရအောင်လေ...
အမ မခင်မင်းဇော်... အမ သိပ်တော်တယ်... သရဲက အမကို အလေးပြုသွားတယ်...း))
မောင်မျိုး March 5, 2011 at 12:23 AM
၀ါးဟားဟား ပိန်ညှောင်ညှောင် သရဲလေးလည်း အိပ်မပျော်တာနဲ့ ရွာလည်ထွက်နေတား)
ဓာတ်ပုံမပြလည်း ကိုယ့်အစ်မကြီးလှပြီးသားဆိုတာ ယုံပါတယ်ဗျာ ဟိုတစ်ယောက်နဲ့မတိုင်နဲ့နော် ကျနော့်လာနာရွက်ဆွဲနေအုံးမယ် ။
Sunny March 5, 2011 at 12:45 AM
သရဲလာခြောက်ရင် ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ ကျွေးလွှတ်လိုက်မယ်.. ဗိုက်တင်းပြီး အိပ်ပျော်သွားမလားပဲ.. :)
ဖြူ March 5, 2011 at 12:45 AM
ကြံင်္ကြဖန်ဖန် ရေးလဲ ရေးတတ်တယ် သက်ဝေရယ်... ရယ်လိုက်ရတာ...
ကိုယ် သရဲဖြစ်ရင် သက်ဝေကို အရင်ဆုံး လာခြောက်မယ်... သက်ဝေ ကြောက်တတ်တာ သိနေတယ်လေ... ဟဲဟဲဟဲ
မိုးယံ March 5, 2011 at 1:20 AM
အနော့်ကို လာခြောက်မယ်ဆို ၀တ်ရုံဖြူ ဖားဖားကြီးဝတ်ပြီးခြောက်ပေးပါရန်.။
ShwunMi- March 5, 2011 at 2:15 AM
ခုနက အဲ့လိုဝတ်မိတယ် “မွဲခြောက်ခြောက် အရောင်အဆင်းနဲ့ ရုပ်ကလဲ ဆိုးဆိုး၊ ဝတ်ထားတာကလဲ ဝတ်ရုံ မည်းမည်းကြီးနဲ့ပေါ့။”း)
နောက်မှ လာခြောက်ဦးမယ်.. မကြီးသက်ဝေကို.. =)
မယ်ကိုး March 5, 2011 at 3:05 AM
:D .... သရဲလေး သနားပါတယ် ... blogger မှ သွားခြောက်မိတယ်လို့ :P
ကို ဖိုးဥာဏ် March 5, 2011 at 3:23 AM
မသက်ဝေက သရဲဝါနုသေးတော့ သရဲတွေ ကို သရဲမှန်းမသိဘဲ လိုက်ခြောက်နေတာ သူတို့က ဘယ်ကြောက်မလဲဗျာ
ကျောက်တာတေကြီး March 5, 2011 at 4:41 AM
ညည အစာထွက်စားတဲ့ စုန်းထင်လို့ ကြွေးမလို့ သေချာ အင်ဖက်လေးနဲ့တောင် ထုပ်ထားသေး...ဒီတခါလာရင် ..ယူသွား.....
ညီလင်းသစ် March 5, 2011 at 6:23 AM
သြော်..ဒါ့ကြောင့် ဟိုနေ့က စာရိုက်နေတုန်း ကွန်ပြူတာ ဘေးမှာ ချထားတဲ့ ကော်ဖီခွက်ကြီး နေရာရွေ့သွားတာ ကိုး...၊း)
Nespresso လား သရဲ ?? What else ??
Rose of Sharon March 5, 2011 at 7:00 AM
အမ... အဆန်းလေးတွေစိတ်ကူးပြီးရေးတတ်တာ တကယ်သဘောကျတယ်...
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 5, 2011 at 8:08 AM
ထမင်းဟင်းတွေ ချက်နေသူတွေက ပိုဆိုးမယ်
ညအိပ်ရင်တောင် ဟင်းခွက်လေးတွေ မျက်စိထဲမြင်ယောင်နေမှာမို့လို့ သရဲကိုမြင်နိုင်မယ် မထင်ဘူးနော်
သရဲလေး သနားစရား)
ပထမ ဖတ်ချိန်တိုင်း အိပ်ချိန်ဖြစ်နေလို့ မဖတ်ရဲတာ...
Vista March 5, 2011 at 9:13 AM
အနော်က သရဲကြောက်တယ် စောစောအိပ်တယ် ..
ပိုစ့်တွေနေ့ ခင်းမှတင်တာ ဟိ။
Hmoo March 5, 2011 at 10:25 AM
နန္ဒာ March 5, 2011 at 11:11 AM
အဲလို အပျော်မျိုးလေး ရေးတတ်တဲ့ အတွေးက ချစ်စရာ။ မနှစ်က တန်ဆောင်မုန်း၊ သူခိုးများနေ့မှာ မမသက်ဝေ ရေးခဲ့တဲ့ ပိုစ့်လေးလဲ နှစ်သက်မိတယ်။
မမသက်ဝေလဲ ဘလောဂ့်ပေါ် သူခိုးဖြစ်လိုက်၊ သရဲဖြစ်လိုက်။ :))
သရဲကို ပြန်ခြောက်သွားတယ်။ :***
စော(အဝါရောင်မြေ) March 5, 2011 at 12:21 PM
စိတ်ကူးနဲ့သရဲခြောက်တာကိုး
နောက်ဆို computer , laptop တွေကို ဟပ်ချလောင်း ဆိုပြီ ဖွတ်ထားလိုက်။
အဲဒီတော့မှ လှုတ်လှုတ်နဲ့ အသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်။
computer ရှာဖို့ လေ
MN March 5, 2011 at 2:12 PM
သက်ဝေ သရဲ... သရဲ သက်ဝေ...
ဆွေလေးမွန် March 5, 2011 at 2:41 PM
ခေါင်းစဉ်လေးသဘောကျလို့။ ဒီရောက်မှ ဘလော့ဂါတွေကို ခြောက်မှန်းသိတာ...
ချစ်ကြည်အေး March 5, 2011 at 7:54 PM
ဩ...ဒါကြောင့် ခုတလော စာရေးပြီး ညောင်းလို့ လမ်းထလျှောက်ဖို့ မတ်တတ် ရပ်လိုက်တိုင်း ဒေါင်လိုက်ကြီး ဖြစ် ဖြစ်နေတာ.... ဒီသရဲမကြောင့်ကိုးးးးးးး))
ပန်းခရမ်းပြာ March 6, 2011 at 5:05 PM
စာမရေးတဲ့ ဘလော်ဂါတွေကိုရော ခြောက်ဦးမှာလား။
ZZZ March 6, 2011 at 6:06 PM
မသက်ဝေကို ကြိုက်သွားပြီ .....
သရဲကြီးရယ် မကြောက်ပါနဲ့.......
မသက်ဝေရဲ့ အတွေး နှင့် အရေးကို ကြိုက်တယ်လို. ပြောတာပါဗျာ .. ခွိခွိ ....
seesein March 7, 2011 at 11:17 AM
သရဲ စုန်း တစေ ကဝေ ဘီလူး တကာတို့ရဲ ထွဋ်ခေါင် ဘလောဂါများကို ခြောက်ဖို့ကျိုးစားရင်း သရဲတကောင် လက်နက်ချ အရှုံးပေး အညံ့ခံ အလင်းဝင်ရောက်သွားကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်
Pauk March 7, 2011 at 11:18 AM
သရဲ အစစ်ရော အတုပါကြောက်တယ်
Iora March 9, 2011 at 4:20 PM
ကေကေ March 12, 2011 at 11:06 PM
သရဲတွေ နိုးနေလားလို့..စီဘုန်းထဲ လာကြည့်တာ..
ဖွင့်မရဘူး..သရဲ နဲ့ ဆော့ချင်လို့..မနက်က ဆော့သွားတာ ကျောက်ဒိုး မေ့ကျန်ခဲ့လို့ လာယူတယ်..း)
Thwin May 23, 2013 at 12:40 AM
သရဲလေး တစ်ကယ် လက်လျှော့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်...။